HIM | Health in Myanmar » 2009 » July
More about the Three Diseases Fund call for Round III Proposals
Inaprevious blog post the call went out. Now in Yangon you can find out more next week …
မေတ္တာရှင် အခမဲ့ဆေးခန်းဖွင့်လှစ်၊ ဒါနပြုလိုသူများ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်
မေတ္တာရှင် အခမဲ့ဆေးခန်းကို (၂၆-၄-၂ဝဝ၉) သောကြာနေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး လူမျိုးဘာသာမရွေး ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထိုဆေးခန်းအတွက် ဒါနပြုလိုသူများ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
Quality of health journalism about Myanmar / Burma
With the recent complaints from IOM about Mizzima and from Mark Farmaner about DVB there may be an opportunity to look at the constraints of local and foreign reporting on health in Myanmar / Burma. Here is an article about it from the always-relevant New Mandala.
Time has passed and some things have changed
The moderator hasacouple of issues with this article.
မြန်မာနိုင်ငံက ရောဂါသုံးမျိုးအတွက် Global Fund ပြန်လည်ကူညီဖို့ စဉ်းစားနေ
မြန်မာနိုင်ငံက ငှက်ဖျား၊ တီဘီနဲ့ HIV/AIDS ရောဂါသုံးမျိုး ကာကွယ်ကုသပေးရေး ရန်ပုံငွေအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၂ဝ ကူညီဖို့ မြန်မာနိုင်ငံက လျှောက်လွှာတင်ထားတာကို Global Fund အဖွဲ့ကြီးက လက်ခံစဉ်းစားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Shampoo in Loikaw
The [him] moderator would like to post more information about shampoo production and other income generating activities for people living with HIV.
AP story keeps the wires humming
The Associated Press wire has been busy over the weekend as several regional news papers from Malaysia and Singapore printed versions of this story. In the Boy in the Bubble Paul Simon writes: “Medicine is magical and magical is ART.”
ROCKER ကြီးရဲ့ လိင်ပညာပေး
ဇော်ဝင်းထွဋ်ရဲ့ လိင်ပညာပေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အတွေးအခေါ် အယူအဆ တွေကို ဒီ ဆောင်းပါးမှာ ဖတ်ရှူ့ရမှာပါ။
HIV ကူးစက်နေသူ အရေအတွက် ကင်ဆာ ရောဂါ ရှင်ထက် နှစ်ဆ ကျော်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် HIV ပိုးကူးစက်ခံနေရသည့် အရေအတွက်မှာ AIDS မဟုတ်သော ကင်ဆာ ရောဂါများ ခံစား နေရသူ အားလုံးပေါင်း ပမာဏ ထက် နှစ်ဆ ကျော်မျှ များပြားနေကြောင်း သိရှိရသည်။
နေ့စဉ် လိင် ဆက်ဆံခြင်း ဖြင့် အမျိုးသားများ သန္ဓေအောင်မှု အကျိုးပြု
နေ့စဉ် နေ့တိုင်း လိင်မှုရေးရာ မှီဝဲခြင်း သည် အမျိုးသား များ၏ သန္ဓေ အောင်စေသည့် ဗီဇ ဆဲလ်များကို ပိုမို အကျိုးပြုကြောင်း သိရှိရသည်။
ကွန်ဒုံး သုံးခြင်းဖြင့် လိင်အင်္ဂါ ရေယုန်ကူးစက်မှု တားဆီးနိုင်
လိင် ဆက်ဆံရာတွင် ကွန်ဒုံး အသုံးပြု ခြင်းသည် ရေယုန် ကူးစက်မှုကို တားဆီး ပေးကြောင်း သိရှိ ရပေသည်။ အမေရိကန်ရှိ သုတေသီများ၏ တွေ့ရှိမှု အသစ်များတွင် ကွန်ဒုံးသည် လိင်အင်္ဂါတွင် ရေယုန်များ ဖြစ်ပွား စေနိုင်မှုကို (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းမျှ လျှော့ချ ပေးနိုင်ကြောင်း ဖော်ထုတ် နိုင်ခဲ့သည်။
Circumcision ပြုလုပ်ထားသူများ လိင် ဆက်ဆံဖက်ကို ပိုမို ကျေနပ်စေနိုင် ဟုဆို
လိင်တံ ထိပ်အရေပြားကို လှီးဖြတ်မှု (circumcision) ပြုလုပ် ထားသည့် အမျိုးသား များသည် ၎င်းတို့၏ လိင် ဆက်ဆံဖက် အမျိုးသမီး များအား ပိုမိုနှစ်သိမ့် ကျေနပ်မှု ပေးနိုင်ကြောင်း စစ်တမ်းများက ဖော်ပြနေသည်။